Ministarri Dantaa Alaa Somaaliyaa Taayitaa Isaaniirraa Uggaraman
mMinistarrii dhimma alaa Somaaliyaa Abdi Said Muusee, Guraandhala 17, 2022
Muummichi Ministaraa Somaaliyaa, Mohaammed Huseen Rooblee ministarri dhimma alaa biyyattii Abdi Said Muusee “cileen Somaaliyaa keessaa dooniidhaan akka gara Oomaanitti akka fe’amu eyyame” jechuun yeroof, hojii irraa ugguranii jiran.
Mootummaan Somaaliyaa akka bosonni biyyattii hin mancaanee fi horiin daldala seeraa alaa walitti-bu’insa biyyattii keessaa gargaaruuf hin oolfamne dhorkuuf jecha, waggoota kudhan dura akka cileen biyyattii keessaa alatti hin ergamne uggure.
Tahus garuu, taayitaa irraa ugguramuu ministara dhimma alaa Somaaliyaa kanaaf sababaan inni dhugaan cileen gara biyya alaatti ergamuu miti – jedhu xiinxaltoonni siyaasaa Somaaliyaa.
Dhaabbata qorannoo Somaaliyaa keessa maadheffate ka “Somali Public Agenda” jedhamuuf itti-aanaa qindeessaa ka tahan – Isaak Farahan, ministarichi dntaa alaa, Museen, prezidaantii Somaaliyaa amma taayitaa gad-lakkisan – Mohaammad Abdullaahii Farmaajootti nama hidhata qabani. Kanaaf, xalayaa muummicha ministaraa Somaaliyaa kana irraa itti dhufuu fi yaada dhihaatuuf fudhataa hin turre, jedhan.
Ministaricha Dhimma alaa Somaaliyaa taayitaa irraa ugguruun akkuma hari’uutti ilaalama, jedhan xiinxaltoonni.
FAOn Gaanfa Afrikaaf Gargaarsaa Akka Barbaadu Beeksise
Maalii Keessatti Haleellaa Hamaan Dhaqqabee Jira
Godaantoota Libiyaa Keessatti Rakkatan Gargaaraa:Garee Dooktoroota Daangaan Hin Uggurre
Itiyoophiyaan Looltoota Koo Torba Ajjeeftee tokko Qabattee Jirti: Sudaan